Shaqadii Xamaaliga Gaari-dameerka Oo Muqdisho Kasii Dabar go’aya – Goobjoog News
Magaalada Muqdisho waxaa sii yaraanaya shaqadii Gaari-dameerada oo nolosha dadka ku xamaasha kaalin muhiim ah kaga jiray.
xaafadaha magaalada ayaa intooda badan biyaha looga dhaami jiray Gaari-dameeerada, taas oo dadka ku shaqeysta ay reerahooda ay ka biilan jireen balse taasi hadda meesha ayey ka baxday.
Horumar laga sameeyay helitanka biyaha caasimadda owgeed, kaalin muhiim ah oo xataa gaarsiisan in ay reeraha ku guuraan ayey soo mareen Gaari-dameerada xilligii dagaallada ay Muqdisho ka socdeen.
Cabdi Sheikh Abuukar ku dhowaad toban-sano ayuu ku shaqeynayaa Gaari-dameerka waxa uu Goobjoog News uga waramay caqabadha soo wajahay shaqadii ay qaban jireen Gaari-dameerada waxa uuna yiri.
“Dameeraha ayaan ku shaqeystaa, marba sida uu qutul-yoonkeenna uu ilaahey nooga soo sahlo ayaa ugu shaqeysannaa, waxaan ku shaqeynayey shaqada Gaari-dameerka muddo dhan lix sano “.
Waddooyinka Muqdisho si joogta ah ayey u xirmaan gaadiidleyda cabasho ayey muujiyaan waxaa is weydiin mudan wadada maka xirantaa Gaari-dameerada, waxaa su’aashaas Goobjoog News uga jawaabay Maxamed Nuur Axmed oo ka mid ah wadayaasha Gaadiidka Dameerka waxa uuna yiri.
“Dhibaatada ugu badan oo aaan qabno waa waddo xirista, dhibaatooyin kale ma qabno “.
Dadka muruq-maalka ah ee ka xeeya gaadiidka Gaari-dameerada badankood waxa ay leeyihiin reero, waxa ayna shaqeeyaan iyaga oo aan heysan tix-gelin shaqo iyo mid bulshaba.
Dadka ku shaqeysta Gaari-dameerada waxaa heysata caqabado shaqo, oo ay ka midyihiin iyaga oo markii hore xaafadaha biyo geyn jiray, ayaa waxaa hadda la galiyey guryihii Tubooyinka biyaha, waxaa sidoo kale ay ka shaqeyn jireen baqaarada, waxaana badalay shaqadoodii gaadiidka loo yaqaanno Bajaajta.